Hilla Limann (wɔ woo no Ɔpɛnimba 12 afe 1934, Owui wɔ ɔpepon da a ɛtɔ so 23, afe 1998) yɛ kane Ghana manpanyin firi September da a ɛtɔ 24, afe 1979 kosii December da afe 1981 mu. ɔbɛyɛɛ aban ananmusini a ɔwɔ Switzerland. Wɔ woo Liman a n’abusua din de Babini no wɔ Atifi fam wɔ Kane Gold Coast no kuro a ede Gwollu, a ɛwɔ Wassa Mansin no mu wɔ Atifi Atɔe Fam. Emfa ho sɛ na n’awofo nni bi no, ɔbɔɔ ne ho mmɔden de ne ho hyɛɛ Nhomasua mu kɔɔ akyiri.
2 Amanɔne nnwuma
5 Nsem foforo
6 Hilla Limann Adoyekuo
Nhomasua[sesa | edit source]
Owie n’ahyɛase sukuu wɔ aban sukuu a na ɛwɔ Tamale no wɔ afe 1949 mu. Firi afe 1957 kosi afe 1960 mo no, osuaa amanyɔsɛm ho ade wɔ Suapɔn a ɛde Londo School of Commerce. Okosua French Kasa wɔ afe Supon a ɛde Sorbonne University a ɛwɔ France. ɔde n’adesua no kopue Suapɔn a ɛde University of London mu ma no nyaa abodin krataa a ɛde BA (Hon) wɔ abakɔsɛm nsɛm mu wo na afe, onyaa abodin krataa a ɛde PhD wo amnyosɛm ne amanmmara mmarasɛm mu firi suapɔn a ɛde University of Paris.
Amanɔne nnwuma[sesa | edit source]
Dr. Limann ye adwuma sɛ ɔkwankyerɛfo, amanɔne pon, wɔ asoe a ɛhwɛ amanɔne nsɛm so wɔ Ghana firi afe 1965 kosii afe 1968. Wɔ 1967 afe no mu no, na ɔka amanmara baguakuo a ɛhwɛ ma wɔhyehyɛɛ Ghanaman mmara wɔ afe 1969 mu. Wɔ afe 1968 mu no, wɔpaw no sɛ ɔman ananmusini a ɔda Ghana ananmusini tenabea wɔ Lomea ɛwɔ Togo. Wɔpaw no sɛ ɔfotuto wɔ Ghana ananmusini tenabea a ɛwo Geneva, Switzerland wɔ afe 1971. Ɔsan nso beyee adwuma sa titenani a ɔhwe Europe, America, Asia Atɔe –Apuei so wɔ Ghana Asoe a ɛhwɛ Amanɔne nsɛm so wɔ afe 1975 mu
Wɔ 1979 abnatugo a ɛnam Jerry Rawlings so bae no, Emfa ho sɛ na wonnim Limann yiye wɔ Ghana no, wɔpaw no sɛ manpanyin wo amanyɔkuo Peoples National Party din mu, na onyaa akyitaafo a wɔn mu dodoɔ no ara yɛ kane manpanyin Kwame Nkrumah Akyitaafo. Ɔkɔperee wɔ abatoɔ no mu bere a aban a ɛwɔ saa bre no, Supreme Milliatry Council sii Imoru Egala kwan wɔ abatoɔ no mu no, onyaa mma no mu ɔha mu nkyekyɛmu 62 de dii nkonim wɔ abatoɔ a ɛkɔɔ so ne pmrɛnu soɔ no.
Dr. Limann hyɛɛ adwumase sɛ manpanyin wɔ September da ɛtɔ so 24, afe 1979. Na ɔyɛ obi ne ntotoe fa sikasem no yɛ nea ɛyɛ kakra na na ɔgye kabi ma menka bi amambuo ne nhyehyei a ɛfa Abibiman ho no tom. Rawlings de abantuguo tuu no wɔ December da ɛtɔ so 31, afe 1981 mu. Eyi ma no bɛyɛɛ manpanyin koro wo adehyeman a ɛtɔ so miɛnsa no mu.
Wɔ afe 1992 bre a na PND saraafo aban no baa n’awie no, Dr. Liman san de no ho hyɛɛ amnyɔsɛm mu ma no kogyinaa wɔ amnyɔkuo People’s National Conventions din mu wɔ manpanyin abatoɔ no mu. Ɔtɔɔ so miɛnsa bre a onyaa mma no mu ɔha mu nkyekyɛmu 6.7. Ɔkɔɔ so de ne ho hyɛɛ amnyɔsem na na ɔda so wɔ Nkrumah Nyehyei mu gyedie.
Owuo[sesa | edit source]
Dr. Limann nyaa yare koankorɔ na owui akyire. Ogyaa ne yere a ɔde owurayere Fluera Liman ne mmɔfra nsɔn; Lariba Montia (née Limann), Baba Limann, Sibi Andan (née Limann), Lida Limann, Daani Limann, Zilla Limann ne Salma Limann
Nsem foforo[sesa | edit source]
Bre a wode dwuamdie a ɛde nneɛma hyɛ afoforo nsa no baa awie wɔ afe 1979 mu no, na asraafoko no mu fo bibi kekea sɛ kane AFRC mu fo no pe sɛ wotu aban gu. Dr. Liman koo so sii so dua sɛ, mmara mma ho kwan se woda so koraa wɔn so wɔ afiase wɔ kabi ma me nka bi amambuo mu. Saa nsɛm yi kaa n’anisoadehunu a ɛne manpanyin agua no, na afei animguase a ɔfaa mu wɔ Rawlings aban ase.
Hilla Limann Adoyekuo[sesa | edit source]
Hilla Liman adɔyekuo no yɛ ayamyɛ kuo a wɔhehyɛ no wɔ afe 2019 de kae mfe 40 bre a wɔpaw no sɛ manpanyin no. kuo no boate ne sɛ ɛbɛboa ma w’atu bu a wobu nnipa fahodie so no ase denam nhomsua so, na wɔboa wɔn a wonnibi mpontuo ne yiyedie, na afei ɛboa ma wɔhyɛ kabi ma menka bi amambuo mu kena
Wɔde abasobɔde a ene Knight Grand Cross of St Michael and St George a efeiri Elizabeth II, Queen of the United Kingdom imaa Limann wo afe 1981.
Retrieved from "https://ak.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilla_Limann&oldid=23718"
This page was last edited on 12 Ahinime 2020, at 14:29.